Shilkii diyaaradaha Saratov sano 2 4 bilood ka hor #992
Diyaaradda Saratov Airlines 703, Antonov An-148, ayaa la burburiyay ka dib markii ay saameyn ku yeelatay jidka agagaarka Stepanovskoye, Ruushka. Dhamaan rakaabkii 65 iyo xubnaha 6 ayaa la dilay.
Diyaaradda ayaa ka kacday garoonka 14R ee madaarka Moscow ee Domodedovo ee 14: 21 saacadaha maxaliga ah (11: 21 UTC). Cimilada xilliga dayuurada ee Diyaarad Domodedovo waxaa ku jira muuqaal kooban (2100m) xilliga barafka fudud. Heerkulku wuxuu ahaa -5 ° C, dusha sare ee daruuraha ee 2600 cagaha AGL.
Guddiga Duulimaadyada Gargaarka Gaarka ah waxay caddeeyeen, ka hor inta aan la tegin, kuleylka saddexda tuubo ee tuubada ayaa aan loo soo jeesteen.
Kadib koontarool, heer sare oo ah 130-150 m (425-490 ft) oo ka sarreeya heerka dhulka, autopilot ayaa loo rogay. Daboolka ayaa la kiciyay markii ay diyaaraduhu fuuleen meel sare oo ka mid ah 550 m (cagaha 1800).
Marka la eego daqiiqado 2 30 ka dib markii la qabsaday, meel sare oo ku saabsan mitirka 1300 (4265 cag) iyo xawaaraha qalabka 465-470 km / h, waxaa jiray farqi u dhexeeya heerka xawaaraha hawada ee dhinaca kabtanka marka la barbar dhigo tilmaamihii hawada . Madaarka hawada ee dhinaca copylot ee aan la garaneynin sida miisaaniyadan aan diiwaan gashanayn duubista macluumaadka duulimaadka. Ma jiraan wax isbeddel ah oo ku yimid tilmaamaha sareeya. Kadib wareegyo kale oo 25 ah, isdhaafka ayaa gaaray 30 km / h iyadoo xawaaraha kooxda kabtanka ah ay ka weyn tahay.
Kadib markii ay kudhawaaqdey tirooyinka 50, meel sare oo ku saabsan mitirka 2000 (6560 ft), hawada hawada ku jirta oo muujinaysa cirka hawada ayaa ah mid aad u sarreeya oo sii waday korodhka iyada oo garoonka diyaaradaha ee ASI uu sii waday inuu hoos u dhaco.
Shaqaalaha duulimaadka ayaa markaa kashifay autopilot. Cimilada garoonka ee kabtanka ayaa sii waday in uu hoos u dhaco, halka ASI-da la soo bandhigay ay muujisay 540-560 km / h. 50-1700 m (1900-5580 ft) oo leh xawaare qumman oo ka bilaabma 6230 ilaa 1.5 g. Duulimaadkani waxa uu ku soo galay garoonka diyaaradaha ee ASI oo ku yaala kooxda kubadda cagta ee 0.5 km / h, iyo ASI-da oo muujinaya 0 km / h. Xagasha wareega ayaa hoos udhacay illaa -200 / -30 oo leh culees xoojin ah oo 35 g.
Diyaaraduhu waxay saameeyeen baraf baraf ah oo ku wareegsan 14: 27: 05 iyo burburay. Ka hor intaanay isku dhacin dhulka, ASI wuxuu u kordhay 800 km / h oo leh ASI-da kabtanka oo weli muujinaya 0 km / h.